शरीरको अनावश्यक रौं हटाउने यति सजिलो घरेलु उपाय , १५ मिनेटमै यसरी हटाउनुहोस् !! – Krazy NepaL
शरीरको अनावश्यक रौं हटाउने यति सजिलो घरेलु उपाय , १५ मिनेटमै यसरी हटाउनुहोस् !!
November 16, 2021 179
काठमाडौँ : धेरैजसो महिलाहरु शरीरमा आउने अनावश्यक रौं हटाउनको लागि विभिन्न किसीमका विधिहरुलाई अपनाउने गर्दछन् । अनुहारमा आउने रौंहरु नाङ्गो आँखाले देख्ने हुदाँ यसले अनुहारको सौन्दर्यतामा समेत कमी ल्याउँदछ । त्यसैले महिलाहरु यस समस्यालाई सकेसम्म चाडैं हटाउने कोशिसमा हुन्छन् ।
यस उपायमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुमा पौष्टिक तत्व( भिटामिन ) खनिज पदार्थ हरु प्रशस्त मात्रामा पाईनुका साथै यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुने भएकोले यसको प्रयोगबाट छालामा चमक आउनुको साथै छाला स्वस्थ हुने गर्दछ । हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अङ्ग छाला भएको कारणले गर्दा छालामा हामीले जे प्रयोग गरेपनि यसलाई रगतले सिधै सोस्दछ ।
बनाउने विधि:-माथिका सबै सामाग्रीहरुलाई मिसाउनुहोस् । त्यस पछि मिश्रणलाई रौं हटाउनुपर्ने ठाउँमा दल्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई १५ मिनेटसम्म त्यसै छोड्नुहोस् । यसपश्चात मन्तातो पानीले पखाल्नुहोस् । तपाइँले यसको प्रयोग गर्दा अनुहारमा क्रिम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ । यस विधिलाई हप्तामा २–३ पटक प्रयोग गरी एक महिनापछि पुन : यस विधिलाई अपनाउनुहोस् । तपाइँको अनावश्यक रौं सधैंको लागि हट्नेछ ।
यस विधिबाट कुनै पिडा नहुने हुँदा तपाइँले यसको प्रयोग सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ । यस विधिको जाँचको लागि सबैभन्दा पहिला हातमा लगाएर हेर्नुहोस् र कुनै प्रकारको जलन नभई राम्रो असर देखिएमा मात्र यसलाई अनुहारको छालामा प्रयोग गर्नुहोस् । यदि तपाइँको छाला संवेदनशील छ भने,विशेषज्ञको सल्लाह लिएर मात्र यस विधिको प्रयोग गर्नुहोस् ।
Prevमंसिर महिना यी ३ ग्रहको बन्यो अचम्मको संयोग, यी राशिलाई मिल्नेछ निकै लाभ
Nextरातारात चमत्कार प्राप्तिका लागि सुत्नुअघि राख्नुहोस् सिरानीमुनी यी ५ चिज
तपाईंकाे वजन कति हुनु पर्छ ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
तिहारको मुखमा काठमाडौं बासीको लागि आयो दुःखद खबर…..